कास्कीकोटमा बोरिङको पानी – Peacepokhara.com
कास्कीकोटमा बोरिङको पानी
पोखरा १७ बैशाख । कास्कीकोटमा खानेपानीको चरम अभाव हटाउन निर्मित बोरिङ उद्घाटन गरिएको छ । करिव ४ सय घर धुरीलाई धारा उपलब्ध हुने गरि एक करोड लागतमा हाम्रो परिबर्तन नेपालले सुरु गरेको बोरिङ खन्ने काम सकिएको छ । अब बोरिङलाई ब्यबस्थित गरी घर घरमा धारा पुर्याउने काम बाँकी रहेको संस्थाका अध्यक्ष डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । बोरिङको विश्व हिन्दु महासंघका उपाध्यक्ष बेदनिधि अधिकारीले उद्घाटन गरे ।
स्थानीय खानेपानीको चरम अभाव भैरहेका बेला सस्थाले गरेको पहलको प्रशंसा गर्दे स्वतस्फुर्त रुपमा सहयोग घोषणा पनि गरेका छन् । कार्यक्रमा बिस्व हिन्दु महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बेदनिधि अधिकारीले १ लाख ११ हजार १ सय ११ ,स्थानियहरु भरत बहादुर अधिकारी १ लाख १ सय , ओम प्रकास सुबेदीले ८० हजार , परमेश्वर बस्ताकोटी ५५ हजार ५ सय ५५ , चुडामणि सुबेदी ५० हजार, मिन बहादुर अधिकारी ५० हजार एक सय , बुद्धि प्रसाद सुबेदी २५ हजार ५ सय २५, हर्क नेपाली २५ हजार ५ सय २५, ईन्द्र बहादुर जिसि २५ हजार, महिला जनजागरण बहुउद्धेश्यीय सहकारी सस्था २० हजार ५ सय ५५, लक्ष्मण गिरि २० हजार, राजु कार्की १५ हजार ५ सय ५५, आनन्द प्रसाद अधिकारी १५ हजार ५ सय ५० , मेघ राज सुबेदी ११ हजार १ सय ११ , शोभाखर सुबेदी १० हजार १०, शिबराज अधिकारी १० हजार १०, बिण्णु प्रसाद तिमल्सीना १० हजार, एकता समाज, कास्कीकोट बाट ५ हजार रुपैया सहयोग घोषणा गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अधिकारीले सस्थाले पुण्य काम गरेको बताए । सबैले सकारात्मक कामको लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा स्थानीय ओम प्रसाद सुबेदी कास्कीकोट बाशिमा रहेको खानेपानि समस्या समाधानका लागि अन्य पहलहरु पनि गर्ने बताए । सस्थाका अध्यक्ष डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो घरघरमा पानी पुग्ने बताए । अब पानीका लागि दुःख पाउने दिन गएको उनको भनाई थियो ।
हाम्रो परिबर्तन नेपालका उपाध्यक्ष हिरामणि न्यौपाने, कोषाध्यक्ष संगिता सुबेदी, हाम्रो परिबर्तन नेपालका मिडिया संयोजक माधब पनेरु, स्थानियबासी परमेश्वर बस्ताकोटी लगायतले बिकासको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।
हङकङ बजारका आगलागी पीडितलाई राहत उलब्ध गराउन माग
बगर भाइखलक जावलाखेल कप भेट्रानको क्वाटर फाइनलमा प्रवेश
पोखरा उपत्यका भित्र ई रिक्सा चलाउन नपाइने